Web Developer (Front-end + CMS mid-weight) x 2
Full-Time Web Developer (Front-end + CMS mid-weight) x 2
NetScriper Co., Ltd – Posted by NetScriper Co., Ltd – Yangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)
Shwe Hosting / NetScriper Co., Ltd မှ အထက်ဖော်ပြပါရာထူးများ ခေါ်ယူနေပါသည်။ လျှောက်ထားသူသည် အောက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်းများ နှင့် ပြည့်စုံရမည်။
၁။ HTML5 / CSS အထူး ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည် (hand-coding ရေးနိုင်ရမည်)
၂။ Responsive Web Design အား ကျွမ်းကျင် နားလည်ရမည်
၃။ Responsive CSS Framework – Bootstrap နှင့် Website ရေးဖူးသူဖြစ်ရမည်
၄။ HTML / CSS လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၆ လ) ရှိသူ ဖြစ်ရမည်
၆။ Design Idea / Design Concept အသင့်အတင့် ရှိရမည်
၇။ WordPress CMS / PHP အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်
(Project Coordinator / Designer များနှင့်တွဲဖက်အလုပ်လုပ်ရမည်။ Client များနှင့် ရံဖန်ရံခါ communicate လုပ်ရမည်)
မည်သည့် Position ကိုမဆို လျှောက်ထားသူသည် အောက်ပါအချက်များကိုလိုက်နာရမည်။
** အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်လိုသူသာ လျှောက်ထားပါ **
** ပျက်ရက်မရှိလုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည် **
** ရုံးချိန် 9AM to 5:30PM (Mon ~ Fri), 9AM to 12:30PM (Saturday)။ Sunday အမြဲပိတ်သည်။ လကုန်အပတ် Saturday ပိတ်သည် **
** ရုံးနေရာ MICT Park လှိုင်မြို့နယ် အားနေ့ စဉ် ရုံးချိန်မှန်အောင်လာနိုင်သူဖြစ်ရမည် **
** အလုပ်တစ်ခုတွင် အနဲဆုံး ၁ နှစ် ခန့် လုပ်မည်ဟု Commitment ပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည် **
** အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာတောင်းနိုင်သည်။ တိုးတက်မှုရှိပါက လစာတိုးပေးသည် **
NetScriper Co., Ltd (Myanmar) နှင့် NetScriper Ltd (UK) သည် Web Design & Hosting ၀န်ဆောင်မှုများပေးသော Company ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် US, UK, Europe, Asia ရှိ နိုင်ငံပေါင်း 20 ကျော်မှ လက်ရှိ Client ပေါင်း 1,000 ကျော်သို့ Domain, Hosting, Business Email, Website Design & Development ၀န်ဆောင်မှုများပေးနေပါသည်။
အထက်ပါ အချက်များနှင့် ပြည့်စုံ၍ စိတ်ဝင်စားသောသူများ NetScriper Co., Ltd, Room-605, Building-14, MICT Park, Hlaing Tsp သို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက် CV ပေးခြင်း ( သို့ ) [email protected] သို့ CV attach လုပ်၍ email ဖြင့်လည်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: cms, web developer, and wordpress. Job expires in 20 days.